Osi nri (igwe na -esi nri azụ na -arụ ọrụ nke ọma)
A na -anabata ikpo ọkụ uzuoku ozugbo, yana ikpo ọkụ na -apụtachaghị ìhè site na isi na jaket ya iji hụ na esiri ihe ọkụkụ nke ọma.
Site na ntọala nchara kama ntọala ntọala, ọnọdụ nrụnye na -agbanwe agbanwe.
Site na igwe na -agbanwe ọsọ iji mezie ọsọ na -agbanwe agbanwe n'efu dịka ụdị azụ dị iche iche dị.
Ogwe isi ahụ dabara na ngwaọrụ akara akpaaka na-edozi, ka ị ghara ịwụfu mmiri, si otú a dobe saịtị ahụ nke ọma.
A kwadebere ya na tank mmiri na -echekwa mmiri iji zere mkpọchi ọkpọkọ na mgbapu mmiri.
Dakọtara na hopper na-enye nri iji hụ na osi ite juputara na azụ azụ, zerekwa ọnọdụ iri nri.
Site na usoro mmiri mmiri, weghachite condensate na igwe mmiri ọkụ, yabụ meziwanye arụmọrụ ọkụ, ka ọ dị ugbu a belata oriri ike.
Site na iko ịchafụ iji lelee ọkwa isi azụ azụ nke ọma.
Dị ka ọkọlọtọ nke arịa nrụgide si dị, a na-eji arịa mgbada carbon dioxide gas ma ọ bụ obere hydrogen electrode DC arụpụta arịa nrụgide niile.
Igwe ahụ emeela ule X-ray na ule nrụgide hydraulic maka ahịrị ịgbado ọkụ site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ aka.
A na -eji Ọdịdị Dị Nchara arụdo sheb na osisi ahụ; inlet & outlet, mkpuchi elu, akụkụ ekpughere akụkụ abụọ bụ igwe anaghị agba nchara.
Jiri mkpuchi mkpuchi mpempe akwụkwọ mgbe mkpuchi, dị mma ma dịkwa mma n'anya.
Ebumnuche nke ikpo ọkụ azụ azụ bụ tumadi iji sterilaiz na ime ka protein sie ike, n'otu oge ahụ hapụkwa ihe mejupụtara mmanụ na abụba anụ ahụ, ka ọ wee mepụta ọnọdụ maka ịbanye na usoro ịpị ọzọ. Ya mere, igwe eji esi nri bụ otu n'ime njikọ kachasị mkpa na usoro mmepụta nri azụ mmiri mmiri.
A na -eji osi ite esi mmiri ọkụ gbanye azụ azụ, ọ bụkwa akụkụ bụ isi nke ihe ọkụkụ azụ zuru oke. Ọ mejupụtara shei cylindrical na akuku gbara okirikiri nwere kpo oku. A kwadebere shei cylindrical na jaket uzuoku na oghere gbara okirikiri na oghere gbara gburugburu na oghere nwere oghere nwere uzuoku na -agafe n'ime.
Akụrụngwa na -abanye n'igwe site n'ọdụ ụgbọ mmiri nri, ọkụ na -agba ya ọkụ na oghere gbara ya gburugburu na jaket uzuoku, wee jiri nwayọ na -aga n'ihu n'okpuru mkpamkpa ahụ. Ka akụrụngwa na -esi nri, a na -eji nwayọ belata olu nke ihe ahụ, a na -akpalitekwa ya ma na -atụgharị ya, n'ikpeazụ, a na -ahapụkwa ya n'ọdụ ụgbọ mmiri na -agbapụta.
Nke gara aga: Ọnụ ego eji eme achịcha azụ azụ - ihe nleba akwa (igwe na -enyocha igwe na -enyocha nri dị elu) - Fanxiang
Osote: Ịghasa Press (High Quality Ugboro abụọ ịghasa Press Fishmeal nhazi Machine)
Nri igwe nri azụ
Onye na -esi nri Steam
Onye na -esi nri Steam kpụ ọkụ n'ọnụ Maka osisi azụ
Oyi (Mpi Price Fish Nri Nri ngwa ncha ...